Irubhi yetshokholethi, yintoni kwaye izisa ziphi izibonelelo? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
I-chocolate yeRuby intsha kwaye inezibonelelo ezininzi zempilo. Inguqulelo yamvanje yetshokholethi sele ithengisiwe kwaye, ngelishwa, ipinki.
Kulungile ukuba awuzange uve ngeshokholethi yeeruby, emva kwayo yonke loo nto, yaphuhliswa ngo-2017 liBelgian brand Barry Callebaut Group. Kwaye iqulethe iipropathi ezahlukeneyo ngenxa yekoko okwenziwa ngayo le tshokholethi, ibizwa ngokuba yindidi yetshokholethi, inezibonelelo zilandelayo.
1 Ruby iitshokholethi izibonelelo
2 Kutheni i-ruby chocolate pink?
3 Yintoni umahluko kwezinye?
Ruby iitshokholethi izibonelelo
Kutheni i-ruby chocolate pink?
I-chocolate yeRuby yenziwa ngesiqhamo esahlukileyo: irub cocoa. Yintoni eyahlula kwezinye iitshokholethi, umbala wayo, ichazwa bubukho beepolyphenols ezinombala ekwakhiweni kwayo.
Ukongeza, ukubila apho iruby edlula khona kuncinci kunabanye. Ke, itshokholethi yerubhi iyabila iintsuku ezintathu kuphela okanye nangaphantsi.
Yintoni umahluko kwezinye?
I-tsokolate yeRuby ayinamnandi kangako kunethokholethi yobisi. Nangona kunjalo, imnandi kunetshokholethi emnyama. Ke ngoko, kunokuba yinto elungileyo kwabo bafuna ukusebenzisa iswekile encinci, kodwa ungayithandi incasa ekrakra yokhetho olusempilweni.
Kwakhona, irubhi yetshokholethi ayinayo imibala eyenziweyo. Ke ngoko, lukhetho olufanelekileyo kwabo bakhetha ukutya kwendalo ngakumbi.
Incasa yayo nayo yahlukile: irubhi yetshokholethi ineziqhamo kunye nevumba elincinci leasidi.
Olu khetho, ngokungafaniyo nabadala, lutyebile kwizakhamzimba. Kungenxa yokuba ii-flavonoids zigcinwa kuyo yonke imveliso ukugcina umbala wepinki wemveliso. I-Flavonoids inokunceda ukuthintela isifo ngokuba ne-antioxidant kunye ne-anti-inflammatory effects.